Kununurwa Kunamatirwa KweVana Vedu Dziviriro | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kununurwa Kunamatirwa KweVana Vedu Dziviriro
Kununurwa Kunamatirwa KweVana Vedu Dziviriro
Pisarema 127: 1-5:
1 Kunze kwekunge Jehovha avaka imba, vanoshanda pasina vanoivaka, kunze kwekuti Jehovha akachengetedza guta, murindi anomuka asi pasina. Hazvina maturo kuti mumuke mangwanani, kumuka kunonoka, mudye chingwa chekusuwa, nekuti saizvozvo unopa mudiwa wake hope. 2 Tarira, vana inhaka yaIshe, uye chibereko chechizvaro mubayiro wake. 3 Miseve iri muruoko rwemhare, ndizvo zvakaitawo vana vouduku. 4 Anofara munhu anegoba rake rizere navo, havanganyadzisi, asi vachataura navavengi pasuwo.
Our vana tinoda minamato yedu zvino kupfuura nakare kose. Dhiyabhorosi ari shure kwechizvarwa chevechidiki nekuti ndivo ramangwana. Tinofanira kumira mumupengo kuti tidzivirire vana vedu kubva mukunyepedzera kwerima. Mumazuva ano ekupedzisira, vana vazhinji vari pasi pekurwiswa nadhiyabhori, huwandu hukuru hwemhosva dzatinoona munyika yedu nhasi dzinoitwa nevana vasati vabva zera. Tinofanira kunamatira kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa kwevana vedu munguva dzino dzekupedzisira. Nhasi ndanyora mimwe minamato yekununura kuchengetedza vana vedu. Iyi minamato yekununurwa ichatitungamira apo isu tichireverera kuchengetedzwa kwevana vedu. Patinonamata iyi minamato nhasi Mwari vachadzikinura vana vedu kubva kune zvakaipa zvese muzita raJesu.
The Bhaibheri inotiudza kuti tidzidzise vana vedu munzira iyo inofanirwa kufamba, (Zvirevo 22: 6) iyo nzira ndiyo nzira kana Ishe. Kana tichida kuona vana vedu vachibudirira uye voita kuti tizvirumbidze, tinofanira kuvarera zvinoenderana nemitemo yeBhaibheri. Iyi minamato yekununurwa yekuchengetedzwa kwevana vedu ichatsemura hutapwa hwaSatani pamusoro pevana vedu, sekuvanamatira kwatinoita zvisinei nekuti vafamba zvakadii, Mwari anovadzosa nekukurumidza muzita raJesu. Ini ndinokukurudzira nhasi, usamborega kunamatira vana vako, vanoda minamato yako kwete zvako zvaunoda, saJobho, (Jobho 1: 5), gara umire munzvimbo yavo kwavari muminamato uye Mwari anozovaponesa uye iwe uchave anodada mubereki nezita raJesu.
1. Baba ndinotuka mweya wega wega, unopesana neMweya waMwari, uchinditadzisa kunakidzwa nevana vangu, muzita raJesu.
2. Ini ndinosunga mweya yega yega kupofumadza pfungwa dzadzo kuti dziwane kugashira mwenje unokudzwa weVhangeri yaIshe wedu Jesu Kristu, muzita raJesu.
3. Rega mweya yese yekusindimara, yekudada uye yekusaremekedza vabereki itize kubva muhupenyu hwavo, muzita raJesu.
4. Baba, paradzai zvese zviri muvana vangu muvadzivise kuita kuda Kwenyu, muzita raJesu.
5.Kutuka kwese, sungano yakaipa nezvinetso zvese zvakagarwa nhaka zvakapfuudzwa kuvana vangu, kudzimwa nekusukwa neropa, muzita raJesu.
6. Kuporofita pamusoro pevana vako, vaidane nezita rimwe nerimwe uye taura mukati maro mune ramangwana
7. Rega kusonganirana uye chibvumirano pakati pevana vangu nevavengi vangu ngachiparadzwe, muzita raJesu.
8. Vana vangu havazotsauswa muhupenyu muzita raJesu.
9. Ini ndinosunungura vana vangu kubva muhusungwa hwe chero hutongi hwakaipa, muzita raJesu.
10. Rega zvakaipa zvese zvakafambiswa neshamwari dzemadhimoni zvibviswe, muzita raJesu.
11. Iwe. . . (taura zita remwana), ini ndinokuparadzanisa newe kubva kune chero munhu anoziva kana asina kuziva dhimoni mapoka kana kubatanidzwa, muzita raJesu.
12. Muzita raJesu, ndinosunungura vana vangu mutirongo yemurume chero upi zvake akasimba muzita raJesu
13. Mwari ngavasimuke uye vavengi vese vemba yangu ngavaparadzirwe, muzita raJesu.
14. Zvese zvakaipa zvakaipa nekuita kwevakadzi vavanhu pane vana vangu ngazviverengerwe, muzita raJesu.
15. Tenda Mwari nemhinduro kumunamato wako.
Previous nyaya20 Kununurwa Pfungwa dzeMunamato Yekuchengetedza Kuroora
inotevera20 minamato Pfungwa dzeKumutsa Muchato Wakafa
Jeri Kukadzi 21, 2020 At 3:53 am
Jobho akamira mubako revana vake asi vakaurayiwa. Ndakazvibvunza kuti sei & Mwari akavatonga sei nekusingaperi?
20 minamato Yeminyengetero ine simba yekumutsa vakafa